बालुवाटार जग्गा प्रक’रण : विजय गच्छदारको सबै सम्पत्ति रोक्का…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
काठमाडौँ : बालुवाटारकाे ललिता निवास (सरकारी) जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका पूर्व-उपप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विजयकुमार गच्छदारको सम्पूर्ण सम्पत्ति रोक्का गरिएको छ। साे प्रकर’णकाे छा’नबिन भइरहेकाले सम्पत्ति राेक्का गरिएकाे बताइएकाे छ ।
सम्पत्ति शु’द्धीकरण तथा अनुसन्धान विभागले गच्छदारकाे काठमाडौं, सुनसरी र मोरङमा रहेकाे जग्गा-जमिन लगायत सम्पत्ति रोक्का गरेको हो । साे प्रक’रणमा मु’छिएका अ’ख्तियार दुरु’पयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातको सम्पत्ति पनि यसअघि नै रोक्का गरिसकिएकाे छ ।
विभागले नेता गच्छदारसहित बालुवाटारकाे उक्त जग्गा हि\_नामिना प्र’करणमा मु’छिएकाहरू सबैमाथि सम्पत्ति छा’नबिन गरिरहेको जनाएकाे छ । स्राेतका अनुसार विभागले उक्त प्रकरणमा संलग्न पूर्वमन्त्री र कर्मचारीहरूवि’रुद्ध छिट्टै मु’द्दा दा’यर गर्ने थालेकाे छ ।
साे जग्गा प्रक’रणमा नेपाली काँग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १७५ जनाविरु’द्ध अख्यि’तारले गत माघ २२ गते विशेष अ’दालतमा भ्रष्टाचार मु’द्दा दा’यर गरेको थियाे । ११२ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरी हिनामिना गरेको साे अभियोगमा अख्ति’यारले मु’द्दा दायर
गरेकाहरूको सूचीमा तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, भूमिसुधार मन्त्री डम्बर श्रेष्ठ र उनीपछिका मन्त्री चन्द्रदेव जोशी, पूर्वसचिवत्रय दीप बस्न्यात, छवीराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीलगायत रहेका थिए । तीमध्ये ११० जनालाई कैद स’जाय र बगो माग दा’बी तथा ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएकाे थियाे ।
Prevसबैथोक नागरिकले नै गर्नुपर्ने भए सरकार किन चाहियो? चर्काे आवाज उठाउनुपर्ने बेला भएन र ? सहमत हुनेले सेयर गर्नुहोस् ।
Nextआफ्ना वैज्ञानिक नछाडे अमेरिकीहरुलाई बन्धक बनाउने चीनको चेतावन…हेर्नुहोस् ।
बाबुरामलाई गिरीको च्यालेन्ज : सक्ने भए ओली-प्रचण्ड-देउवा विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी दिनु…हेर्नुहोस् ।
डा. गोविन्द केसीकी आमा भन्छिन : मैले मेरो छोरा देश र जनताका लागि समर्पण गरे…पूरा पढी सेयर गर्नुहोस् ।